News Collection: के यसको उपचार हुन सक्दैन ?
के यसको उपचार हुन सक्दैन ?
म २५ वषर्ीय अविवाहित युवक हुँ। मेरो समस्या के हो भने पहिले मेरो लिङ्ग सीधा थियो। म उत्तेजनामा आउँदा लिङ्गलाई सुतेको बेला बेडमा प्रेस गर्थें र त्यस बेला लिङ्ग बाङ्गन्िथ्यो र दुख्थ्यो। अहिले लिङ्ग देब्रेतिर आधी नै बाङ्गो भएको छ। बाङ्गो भएकाले लिङ्गलाई हल्का प्रेस पर्‍यो भने पनि बीच भागबाट भाँचिएर दोबि्रन्छ। सीधा अवस्थामा हुँदैन। पछि गएर यौनसम्पर्क गर्न अपयारो पर्छ जस्तो भैरहेको छ। अब मैले यसको उपचारका लागि के गर्नुपर्छ। के कुनै साधारण उपचारबाट लिङ्गलाई सीधा गर्न सकिन्छ ? के यसको उपचार हुन सक्दैन ?
लिङ्ग प्रायः सधैंजसो छोपिने अङ्ग भए पनि यसको बनावटका सम्बन्धमा निकै चासो हुन्छ। पुरुषको 'व्यक्तित्व', 'पौरुषत्व' वा भनौं पहिचान तथा आत्मसम्मानसँग जोडिएकाले अन्य अङ्गभन्दा पनि यसको सांकेतिक महत्त्व बढी छ। सायद त्यसैले होला, कुनै पनि व्यक्ति उसको यौन तथा प्रजनन अङ्गको नाप तथा आकारप्रति सजग हुनु अस्वाभाविक होइन। विशेष गरी आफ्ना साथीहरूसँग तुलना गर्दा फरक भए यो बढी चिन्ताको विषय हुन्छ।
यस्तो स्थिति नआओस् भनेर अलि फरक किसिमले गरिने यौनसम्पर्क गर्दा होस् वा हस्तमैथुन गर्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। यसो गरे लिङ्गमा असामान्य रूपमा दबाब वा चोट पुग्दैन र लिङ्ग भाँच्चिने स्थिति पनि आउँदैन। यौनसम्पर्कको सन्दर्भ महिला पुरुषको माथितिर बसेर यौन सम्पर्क गर्दा लिङ्गमा कुनै किसिमको दबाब नपुगोस् भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। तपाईंको सन्दर्भमा यस्तो केही भएको थियो कि थिएन थाहा भएन, थप जानकारीसहित पत्र लेख्नुभए जिज्ञासाको जवाफ दिन सजिलो हुने थियो।